Keteni yenyanga yakagadzirwa nefekitari yokutengesa webora yesimbi - China Boegger
Keteni yesimbi ine zviuru zvemabhora maduku ane simbi ane zvinhu zvekare kana kuti kupedziswa kwekare mugumisiro wakanaka uye unofadza. Inogona kukamurwa mumarudzi matatu akasiana - siana: ball ball ball. Zvose zvakawanda zvine ukurura uye mavara nokuda kwokusarudza kwako. Keda yemvura yemvura, inonziwo kedati yebhora, haigoni bedzi kuparadzanisa kana kuti kudzika nzvimbo, asiwo abvumira mhepo nechiedza kuparadzira. Uye nechiratidziko chinonakidza uye chinopenya, keteni yesimbi yakakodzera nokuda kwezvishandiso zvakasiyana - siyana. Horo dzokuratidzwa, discotheques, nightclub, zvitoro zvekutengesa, nzvimbo yepasi, nezvimwe nzvimbo dzakawanda dzakanaka idzo dzinoda kuwana zvinhu zvakasikwa nekheteni yesimbi.
Zviri pachena: checarbon simbi rakaderera, simbi risina simba, aluminium, simbi, mhangura.
L midhiyo yeBead: 2/2.4/3.2 / 4.0 / 5.5/5.0/6 / 8/10/12 mm.
I Surface Treatment: electroplate, machwarwa, chrome plated, spray lacquer, njwo.
I chimiro cheBead: chitendero, chimiro chemapu, chive, chimiro cherugby, ev.
L Paking: nyama yemapurangi
L inenge mitambo 66 mumita.
L Color, chimiro noukuru zvinogona kuitwa.
L Kuchinja nokuchinja.
Ini chitarisiko chinofadza.
Ndiri nyore kuisa ndokupa.
Ini handina ruvara rukuru.
Ini hakuna kubudirira.
Nemhaka yegadziri yayo yechienzi, keteni yesimbi inoratidzika mazuva ano, yakachena uye yakaisvonaka. Kunogona kuva muparadzanisi unoshamisa wenzvimbo, nokuda kwokuita nzvimbo yakavanzika uye kuzara. Nemavara akawanda nezvimiro, kedeni yebhora yesimbi inogona kushandiswa sokurapwa kwamawindo, vanoparadzanisa, maketeni dzorusvingo, zvinoshongedza zvimwe, uye zvakawanda. Inogona kushandiswa muna:
I Imba yokuratidza.
I Concert malls.
I Chivako cheHofisi.
L Zvakawanda zvakawanda: nokuda kwourefu ipi neipi yekheteni yesimbi, ipapo yakagadzirwa mumabhegi ePE woisa mabhegi mumabhokisi.
L Spool pachena: kedeni yesimbi yakarongwa mumapuro, uye yakagadzirwa mumabhegi ePE mukati, mabhokisi okunze.
Mbiri:Kechi yokubatanidza mvura
Taga: metal bead curtain, ball chain curtain,